Manome fahazoan-dàlana ho an'ny filoha amerikana Donald Trump i Iran - teles relay
Manome fahazoan-dàlana hisambotra ny filoha amerikana Donald Trump i Iran
The Iran dia namoaka ny valin'ny fisamborana ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump taorian'ny fitokonana drone izay namonoana ny jeneraly Iraniana zokiolona tamin'ny Janoary, hoy ny filazan'ny sampam-baovao semi-ofisialy tamin'ny alatsinainy.
I Trump dia iray amin'ireo olona 36 izay namelan'i Iran ny antontan-taratasy fisamborana noho ny fahafatesan'i Qasem Soleimani, kaomandin'ny mpiambina ny Revolisionera Islamika (IRGC), hoy i Fars, fa ny jeneraly mpisolovava Tehran, Ali Alqasi Mehr dia nilaza fa i Trump dia eo amin'ny tampon'ny lisitra.
Nilaza i Mehr fa hiatrika fiampangana i Trump raha vao miala amin'ny fiadidiany izy rehefa tapitra ny fe-potoam-piorenany, dia nitatitra i Fars.
Nilaza koa i Iran fa nangataka ny Interpol hamoaka taratasy mena ho an'ny olona 36, ​​hoy ny filazan'ny masoivohom-baovao ISNA semi-manampahefana, na dia tsy azo ekena aza ny Interpol. .
Tao anatin'ny fanambarana ho an'ny CNN, Interpol dia nilaza fa "tsy handinika ny fangatahana an'io natiora io". Nanazava izy fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenany sy ny lalàmpanorenany, izay mamaritra "fa ny lalàna dia mandrara tsy hanao fitsabahana na hetsika hetsika politika, miaramila, ara-pinoana na firazanana".
Saripika Qasem Soleimani tamin'ny Septambra 2013
"Stuntman politika": manam-pahefana amerikana
Ny solontena manokan'i Etazonia ho an'i Iran Brian Hook dia niantso ny hetsika ho "tsofoka politika" nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iraisana niaraka tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Saodiana, Adel al-Jubeir tamin'ny alatsinainy.
"Propagandy efa zatra antsika izany", hoy i Hook. "Tsy misy ifandraisany amin'ny fiarovana nasionaly, ny fandriam-pahalemana iraisam-pirenena na ny fampiroboroboana ny fahamarinan-toerana, ka izany no ahitantsika ny maha izy azy - hetsika fampielezan-kevitra izany tsy misy olona mandray andraikitra lehibe ary mahatonga azy Siriana adala, "hoy izy.
I Soleimani dia maty tamin'ny fanafihana drone amerikanina tany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Baghdad tamin'ny Janoary niaraka tamin'ny olona dimy hafa, anisan'izany i Abu Mahdi al-Muhandis, lefitry ny lefitry ny Tafika malaza Mobilization Irakiana (PMF) Iraniana.
Nanaitra ilay mpandefitra ilay fitokonana, fanamelohan'i Iran sy ireo mpiara-dia aminy ho toy ny "famonoan'olona" momba ny fanarenana ny faritra vaovao.
Nisy mpitondra tenin'ny mpitsara Iraniana, Gholam-Hossein Esmaili, dia nanambara tamin'ny fiandohan'ny volana jona fa nisy teratany Iraniana voaheloka ho faty noho ny filazany fa miasa ho an'ny sampam-pitsikilovana vahiny. Esmaili dia nilaza i Seyed Mahmoud Mousavi Majd fa nanambara ny toerana misy an'i Soleimani amin'ireo manampahefana manan-tsaina amerikana.
Barr sy Pompeo shift justification amin'ny fitokonana Iraniana avy amin'ny "akaiky" mampihorohoro amin'ny fahasimban'ny fahasimbana
Ny fitantanan'i Trump dia nahita an'i Soleimani ho mpamono olona tsy mifono habibiana, ary ny filoham-pirenena dia nilaza tamin'ny mpanao gazety tamin'ny Janoary fa tokony nofoanana ny filoham-pirenena tamin'ny ankapobeny.
Ny Pentagon dia niampanga an'i Soleimani tamin'ny fahafatesan'ireo Amerikanina an-jatony sy ireo mpiara-dia Amerikanina an-jatony tao anatin'ny volana vitsivitsy nialoha ny namonoana azy.
"Jeneraly Soleimani dia namolavola tetika mavitrika hanafika ny diplaomaty amerikana sy ny miaramila any Irak ary manerana ny faritra," hoy ny Pentagon, niantso ilay fitokonana hoe "hetsika fiarovan-tena hentitra" mikendry ny hanakanana ny fanafihana Iraniana ho avy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://edition.cnn.com/2020/06/29/middleeast/iran-arrest-warrant-donald-trump-intl/index.html
03 Asa mahavariana azonao atao any an-trano mandritra io vanim-potoana Coronavirus io